Global Voices teny Malagasy » Nisambotra Mpanao Gazety sy ny Rahalahiny Ny Polisy Nizeriana Noho Ny Lahatsoratra Tsy Nosoratan’izy Ireo Akory · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2018 5:20 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Daniel Elombah no mpitantana ny elombah.com . Araka ny filazan'ny Premium Times , nosamborina tao an-tranony tao Nnewi, any atsimo atsinanan'i Nizeria ry Elombah:
Nilaza tamin'ny Komity Fiarovana ny mpanao gazety (CPJ) i Daniel Elombah fa nanonona lahatsoratra navoaka tao amin'ny Opinion Nigeria ho anton'ny fisamborana azy ny polisy. Nilaza ny lahatsoratra, nivoaka tamin'ny 22 Desambra 2017 tao amin'ny Opinion Nigeria , izay tsy nosoratan'ny iray tamin'ireo mpirahalahy, fa voarohirohy tamin'ny “entana mahatonga fifandirana tsy misy fiafarany” ny Inspektera Jeneralin'ny Polisy ao Nizeria.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Daily Post , niala tamin'ireo fanontaniana mivantana momba ny antony nisamborana an'ireo Elombahs ny Inspektera Jeneraly Ibrahim, nilaza fotsiny izy fa “rehefa mandika lalàna ianao, dia andraikitray ny miantoka fa mandray fepetra izahay.”
Navotsotra avy eo ity mpanao gazety ity ny hariva ary nampidirina hopitaly tany Abuja fotoany fohy taorian'izany. Na dia tsy nisy fanazavana ofisialy aza nomen'i Elombah momba ny fampidirana azy hopitaly, dia toa tsy maintsy mitsabo tena ity mpanao gazety ity rehefa “nofatorana rojy vy tahaka ny mpanao heloka bevava ny tanany ary nentina tao anaty fiara fitaterana nandeha tamin'ny lalan-dratsy nandritra ny 1126 kilaometatra nankany Abuja.” Nandritra ny dian'izy ireo “niharan'ny herisetra, nahazo tehamaina, nodarohan'ny polisy Nizeriana ry Elombah”, araka ny tatitra avy amin'ny gazety Vanguard  .
Mbola tsy navotsotry ny polisy i Timothy rahalahiny. Ny 2 janoary 2018, nanome alalana ny hanitarana ny fitazonana an'i Timoty ny Fitsarana ao Abuja . “Ahafahanay manatontosa fanadihadinana alohan'ny fametrahana fitoriana miampanga azy,” hoy ny mpitondratenin'ny polisy.
Nitory ny Inspektera Jeneralin'ny Polisy ho nanitsakitsaka ny zony fototra tany amin'ny Fitsarana Ambony ao amin'ny Renivohitra Federalin'i Abuja i Daniel Elombah. Mangataka onitra 2 miliara Naira  (eo ho eo amin'ny 5,5 tapitrisa dolara) noho ny fahavoazana nahazo azy tamin'ny fanagadrana azy tsy ara-dalàna.
Tahaka izany ihany koa, nandefa fangatahana  tany amin'ny solombavambahoaka Britanika, Lyn Brown, sy ny Praiministra, Theresa May ary ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Boris Johnson ireo mpisolovava telo monina any amin'ny Fanjakana Mitambatra (Royaume-Uni) noho ny fisamborana tsy ara-dalàna an'i Daniel Elombah.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/23/113817/
 Komity Fiarovana ny mpanao gazety (CPJ) : https://cpj.org/2018/01/nigerian-journalist-detained-over-critical-article.php
 resadresaka nifanaovana tamin'ny Daily Post: http://dailypost.ng/2018/01/05/ig-police-breaks-silence-arrest-elombah-brothers/
 nampidirina hopitaly : https://elombah.com/index.php/sport/football/22980-daniel-elombah-hospitalised-in-a-garki-hospital-abuja
 Fitsarana ao Abuja: https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/254274-nigeria-police-hold-journalist-days-publication-ig.html
 2 miliara Naira: https://aledeh.com/unlawful-arrest-elombah-sues-igp-2-billion-naira/
 nandefa fangatahana: https://aledeh.com/u-k-solicitors-petition-mp-foreign-affairs-minister-and-prime-minister-over-elombah-arrest/